Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyarada OYSU Melbourn oo kulankoodi caadiga ahaa isugu yimid
Ururka Dhalinyarada OYSU Melbourn oo kulankoodi caadiga ahaa isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ December 26, 2012
Maanta oo bishu tahay 26 December 2012 waxeey ururka OYSU Melbourne iskugu yimaadeen shir ay ku falanqeeynayeen wax qabadka iyo qorshayaasha ururka miiska u saaraan. Shirkaan ayaa waxaa marti u ahaa oysu Melbourne Xassan Qubi.
Waxaa shirka furay Gudoomiyaha ururka OYSU Melbourne Marwo Luul, isla markaasna u mahadcelisay dhamaan xubnaha ka sooqeyb galay shirkaan. Marwa Luul ayaa u dulmartay dhamaan xubnaha shirka ka soqeybgalay waxqabadka ururka OYSU Melbourne oo run ahaantii muujisay dadaal culus sanadkii 2012. Qodobada shirka ayaa waxaa kamid ahaa,
1. abaabulka iyo howlqeybiska barmaamijka Cun oo Caawi ey qaban donaan oysu Melbourne bisha soosocota 12 January 2012,
2. ka qeybgalka shirka OYSU worldwide ee lagu qabaandoono USA San Diago,
3. Wax qabadka oysu Melbourne ee January illaa May 2013.
Ururka OYSU Melbourne ayaa ah urur u taagan hormarinta halganka S/Ogadenia. Waxay markasta u taaganyihin sidii ay xasuuqa shacabka s/Ogadenia u gaarsinlahaayeen dhamaan qowmiyaadka kaladuwan ee ku nool dalka Australia.
Shirka ayaa ku dhamaadey jawi wanaagsan, waxaana lagu kalatagay shaqo-wadaag, kaladanbeyn iyo in daacad lo’ahaado halganka xaqa ah.